ဘာတွေလိုအပ်ပြီး ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်လဲဆိုတာ သိရင်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုစတင်ဖို့ မခက်ပါဘူး။ | YEC
သိန်း ၁၀၀ အောက်လုပ်ငန်းဘယ်လုပ်ငန်းတွေမဆို
2. Marketing နှစ်ခုလိုတယ်။
Product နဲ့ Service ကို ဝယ်ရောင်းပြန်လုပ်မှာလား? ဒါမှမဟုတ် ဘာ Value-added ပြန်လုပ်မှာလည်း ဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Service အနေနဲ့ Skill ကို ပြန်ရောင်းမှာလား?
သိန်းတစ်ရာအောက်လုပ်ငန်း အများစုဟာ Skill ပေါ်အခြေခံတဲ့အခါ ROI (Return on Investment) ပိုများတာကို တွေ.ရပါတယ်။ ပုံမှန် လုပ်ငန်းခွင်မှာ သုံးလို့ရတဲ့ Skill တစ်ခုရဖို့ တကယ်လေ့လာမယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်လောက်ပဲ ကြာပါတယ်။ ဥပမာ ဖုန်းပြင်လုပ်ငန်း၊ Photoshop နဲ့ Graphic Designer၊ ဘွဲ.ရပြီးစာအုပ်ဖတ်နေကျဆို Creative Writing၊ ဒါမှ မဟုုတ် Excel လား။ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒီတော. ဒီ Skill တွေကိုု ဘယ် Platform ကနေ Market လုပ်ရမလည်းဆိုတာ မေးစရာရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်အတွက် http://www.chatesat.com/main/showSignupView ချိပ်ဆက်ဆိုတဲ. Platform လိုမျိုးတွေရှိနေပါပြီ။
ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း စခဲ.ဖူးတဲ့ သိန်း ၁၀၀ အောက်လုပ်ငန်းသုံးခုရှိပါတယ်။
Mebook (2011) http://getmebook.weebly.com/ (မတည်ငွေ သိန်း ၂၀)
New Sky (March 2014) www.facebook.com/newskymdy (မတည်ငွေ သိန်း 100)
Y.E.C Learning Center (June 2015) မတည်ငွေ ၃ သိန်း (www.facebook.com/yeclearningcenter)
Startup တွေကို စိတ်ဝင်စားတာနဲ့အတူ သိန်းတစ်ရာအောက်လုပ်လို့ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆရာမဟုုတ်ပါ။ စမ်းသပ်မှုတွေကို လုုပ်ဆောင်နေသူသာဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ Life Coach တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ သိန်းတစ်ရာရင်းနှီး မြုပ်နှံစရာမလိုပါဘူး။ SME Consultant ဖြစ်ဖို. ငွေအများကြီးမလိုပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ Business Plan မရှိဘဲ Run နေတဲ့ SME တွေ 90% ကျော်ရှိပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ Learning နဲ့ ပတ်သက်လို့ Accelerated Learning တွေ လုပ်လို.ရပါတယ်။ Career Coach လိုမျိုး ဆယ်တန်းပြီးကျောင်းသားတွေကို Personality Test လုပ်ပေးပြီး ဘယ်သင်တန်းတက်သင့်တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ Business စလို.ရပါတယ်။
အရေးကြီးဆုံးကတော့ Timing ပါ။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ Skill ဒါမှ မဟုတ် Product or Service ဟာ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် Market မှာ ဘယ်အချိန်အသုံးချလို့ရမလည်း စဥ်းစားပြီး ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ပြောချင်တာက SME တွေကို ကူညီမည့် လှိုင်းလုံုးကြီးတွေ လာတော့မယ်။ တကယ်လို့ Entrepreneurship ကို စိတ်ဝင်စားရင် ဒါမှမဟုတ် SME တွေကို ကူညီပေးဖို့ စိတ်ဝင်စားရင် စတင်ပြင်ဆင်သင့်ပါပြီ။ Marketing Budget အများကြီးသုံးပြီး ဖွင့်ပွဲတွေလုပ်တာထက် Dropbox တို့၊ Uber တို့သွားသလို Growth-hacker marketing လိုအပ်ပါတယ်။